ကြက်သွန်နီလှီးတဲ့အခါ မျက်ရည်မကျစေဖို့ | MyFood Myanmar
မီးဖိုခြောငျဝငျတဲ့ လူအမြားစုဟာ ကွကျသှနျနီ လှီးတဲ့ အခါမှာ ၄နှဈသမီး အရှယျတှလေို ငိုကွတော့တာပါပဲ။ ဒီလို မဖွဈစဖေို့ နညျးလမျးလေး တခြို့ကို မြှဝခေငျြပါတယျ။ ရိုးရှငျးပွီး လှယျကူတဲ့ နညျးလမျးလေးတှမေို့ အသုံးတညျ့မှာပါ။ အိမျရှငျမတှရေော အိမျရှငျထီးတှပေါ ထပျမငိုဖို့ တာဝနျ ယူပါတယျ။
၁။ မလှီးခငျမှာ ရခေဲသတ်ေတာထဲ ထညျ့ထားပါ။
ကွကျသှနျနီကို မလှီးခငျမှာ တခွား အလုပျတှေ လုပျနရေငျး သူ့ကို ရခေဲသတ်ေတာထဲ ခဏ ထညျ့ထားလိုကျပါ။ ၁၅မိနဈလောကျပါပဲ။ အေးလာတဲ့ အခါ သူ့ဆီကနေ မကျြရညျထှကျစတေဲ့ ဓာတျတှဟော တဖွညျးဖွညျး လြော့နညျးသှားပါတယျ။ အကွာကွီးတော့ မထညျ့ထားနဲ့နျော။
စပွီး ကွကျသှနျလှီးတော့မယျ ဆိုတာနဲ့ ပေါငျမုနျ့ အပိုငျးအစလေးကို ကိုကျထားပါ။ မကျြလုံးတှကေတော့ မှနျပွီး ရဲလာပါလိမျ့မယျ ဒါပမေယျ့ မကျြရညျမကတြော့ပါဘူး. ပေါငျမုနျ့ဟာ ကွကျသှနျနီက ထှကျတဲ့ Sulfuric ဓာတျပေါငျးကို မကျြလုံးထဲ မဝငျအောငျ တားဆီးပေးပါတယျ။ လှီးတာ မပွီးခငျ စားမပဈလိုကျနဲ့ဦးနျော
၃။ သံပုရာရညျကို ဓါးမှာ သုတျလိမျးပါ။
ကွကျသှနျ မလှီးခငျ ဓါးမှာ သံပုရာရညျကို သုတျထားပေးပါ။ သံပုရာသီးရဲ့ စီထရှဈ အကျဆဈဓာတျဟာ ကွကျသှနျလှီးလိုကျတဲ့ အခါတိုငျး ဓာတျပွုပွီး မှနျစတေဲ့ ဓာတျတှေ ထပျမထှကျလာနိုငျတော့တာပါ။ လှယျကူစမေယျ့ နညျးလမျးမို့ အသုံးဝငျစပေါတယျ။
၄။ ဓါးကို မလှီးခငျ သှေးထားပါ။
တှေးကွညျ့ရငျတော့ လှယျပါတယျ။ ဓါးတုံးနရေငျ လှီးတဲ့အခါ ပိုကွာပွီး ပိုမှနျစမှောပါ ဒါကွောငျ့ ဓါးကို မလှီးခငျ နညျးနညျး ဓါးသှေးကြောကျလေးနဲ့ တိုကျလိုကျပါ။
၅။ ကွကျသှနျလှီးတဲ့အခါ တပျတဲ့ မကျြမှနျကို အသုံးပွုပါ။
အနောကျနိုငျငံတှမှောတော့ Goggles ဆိုတဲ့ မကျြမှနျကို အသုံးပွုကွပါတယျ။
၆။ ရကေနြတေဲ့ နရောမှာ လှီးပါ
ရပေိုကျခေါငျးကနေ ရကေို ဖှငျ့ထားပွီး အဲ့ဒီအောကျမှာ လှီးရငျလညျး မကျြရညျကမြှုကို ကာကှယျပေးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ရကေုနျတဲ့ အတှကျ သိပျတော့ အဆငျမပွပေါဘူး။
၇။ အနီးမှာ ဖယောငျးတိုငျ ထှနျးထားပါ။
ကွကျသှနျလှီးတဲ့ အနားမှာ ဖယောငျးတိုငျ တဈတိုငျ ထှနျးထားပွီး လှီးရငျ မကျြရညျမကစြပေါဘူး။
ကဲ..ကိုယျနဲ့ အဆငျပွနေိုငျမယျ့ နညျးလမျးလေးတှေ သုံးပွီး စမျးသပျကွညျ့ကွစို့။
Featured Image Source: Yuppiechef.com
မီးဖိုချောင်ဝင်တဲ့ လူအများစုဟာ ကြက်သွန်နီ လှီးတဲ့ အခါမှာ ၄နှစ်သမီး အရွယ်တွေလို ငိုကြတော့တာပါပဲ။ ဒီလို မဖြစ်စေဖို့ နည်းလမ်းလေး တချို့ကို မျှဝေချင်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းပြီး လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေမို့ အသုံးတည့်မှာပါ။ အိမ်ရှင်မတွေရော အိမ်ရှင်ထီးတွေပါ ထပ်မငိုဖို့ တာဝန် ယူပါတယ်။
၁။ မလှီးခင်မှာ ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ထားပါ။
ကြက်သွန်နီကို မလှီးခင်မှာ တခြား အလုပ်တွေ လုပ်နေရင်း သူ့ကို ရေခဲသေတ္တာထဲ ခဏ ထည့်ထားလိုက်ပါ။ ၁၅မိနစ်လောက်ပါပဲ။ အေးလာတဲ့ အခါ သူ့ဆီကနေ မျက်ရည်ထွက်စေတဲ့ ဓာတ်တွေဟာ တဖြည်းဖြည်း လျော့နည်းသွားပါတယ်။ အကြာကြီးတော့ မထည့်ထားနဲ့နော်။
စပြီး ကြက်သွန်လှီးတော့မယ် ဆိုတာနဲ့ ပေါင်မုန့် အပိုင်းအစလေးကို ကိုက်ထားပါ။ မျက်လုံးတွေကတော့ မွှန်ပြီး ရဲလာပါလိမ့်မယ် ဒါပေမယ့် မျက်ရည်မကျတော့ပါဘူး. ပေါင်မုန့်ဟာ ကြက်သွန်နီက ထွက်တဲ့ Sulfuric ဓာတ်ပေါင်းကို မျက်လုံးထဲ မ၀င်အောင် တားဆီးပေးပါတယ်။ လှီးတာ မပြီးခင် စားမပစ်လိုက်နဲ့ဦးနော်
၃။ သံပုရာရည်ကို ဓါးမှာ သုတ်လိမ်းပါ။
ကြက်သွန် မလှီးခင် ဓါးမှာ သံပုရာရည်ကို သုတ်ထားပေးပါ။ သံပုရာသီးရဲ့ စီထရွစ် အက်ဆစ်ဓာတ်ဟာ ကြက်သွန်လှီးလိုက်တဲ့ အခါတိုင်း ဓာတ်ပြုပြီး မွှန်စေတဲ့ ဓာတ်တွေ ထပ်မထွက်လာနိုင်တော့တာပါ။ လွယ်ကူစေမယ့် နည်းလမ်းမို့ အသုံးဝင်စေပါတယ်။
၄။ ဓါးကို မလှီးခင် သွေးထားပါ။
တွေးကြည့်ရင်တော့ လွယ်ပါတယ်။ ဓါးတုံးနေရင် လှီးတဲ့အခါ ပိုကြာပြီး ပိုမွှန်စေမှာပါ ဒါကြောင့် ဓါးကို မလှီးခင် နည်းနည်း ဓါးသွေးကျောက်လေးနဲ့ တိုက်လိုက်ပါ။
၅။ ကြက်သွန်လှီးတဲ့အခါ တပ်တဲ့ မျက်မှန်ကို အသုံးပြုပါ။
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ Goggles ဆိုတဲ့ မျက်မှန်ကို အသုံးပြုကြပါတယ်။
၆။ ရေကျနေတဲ့ နေရာမှာ လှီးပါ
ရေပိုက်ခေါင်းကနေ ရေကို ဖွင့်ထားပြီး အဲ့ဒီအောက်မှာ လှီးရင်လည်း မျက်ရည်ကျမှုကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေကုန်တဲ့ အတွက် သိပ်တော့ အဆင်မပြေပါဘူး။
၇။ အနီးမှာ ဖယောင်းတိုင် ထွန်းထားပါ။
ကြက်သွန်လှီးတဲ့ အနားမှာ ဖယောင်းတိုင် တစ်တိုင် ထွန်းထားပြီး လှီးရင် မျက်ရည်မကျစေပါဘူး။
ကဲ..ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ သုံးပြီး စမ်းသပ်ကြည့်ကြစို့။
MyFood Myanmar2019-10-11T22:24:12+06:30March 10th, 2016|Knowledge|